Manchester oo guul yaab leh qaadatey iyo Arteta oo Arsenal qasaariyey + sawiro | HobyoNet.Com
Manchester oo guul yaab leh qaadatey iyo Arteta oo Arsenal qasaariyey + sawiro
Sports-hobyonet)Ilaa 7 ciyaarood oo katirsan horyaalka Premier League England ayaa dheeley,iyadoo kooxda Man united iyo wiilkooda reer Mexico ee Hernandez layaab kasoo dhigeen garoonka Villa Park,markii 2-3 kaga soo guuleysteen ciyaar xiiso lahayd.
Intii aysan dhamaan qeybtii hore ayaa daqiiqadii 45-aad Aston villa u suurta gashey inay hogaanka qabtaan markii ciyaaryahankooda Andreas Weimann uu u dhaliyey gool,waxaana markii dib leysugu soo laabtey daqiiqadii 50-aad mar kale ciyaaryahan Andreas Weimann uu ka dhaliyey United goolkii labaad 2-0 ayeyna kooxda Aston Villa hogaanka ku qabatey.
Laakiin Manchester isma dhiibin ciyaaryahanka bedelka lagu keenay qeybtii 2-aad ee ciyaarta Javier Hernandez ayaa gool usoo celiyey daqiiqadii 58-aad,sidoo kale kubad uu kasoo shaqeeyey ayey ku dhacdey ciyaaryahanka captanka u ah Astonvilla ee Ron Vlaar daqiiqadii 63-aad 2-2 ayey ciyaartu ahaatay.
Manchester ayaa sii wadey weerarkeedii joogtada ahaa,marka laga soo tago kubado Contro Attack oo ay sameeyeen Astonvilla mooyee dhinaca kale garoonka waxaa maamuleysey Man U iyadoo u suurta gashey Cross Free Kick uu soo qaadey Robin van Persie’ inuu Hernandez si qurux badan madaxa ugu dhameystiro sidaasina Manchester United 3-2 guushu ku raacdey,taasoo ka dhigan inaweli kursiga sare ku fadhiyaan oo 4 dhibic ka horeeyaan Chelsea oo kulan adag la leh Liverpool.
Dhinaca kale Arsenal ayaa iska qasaarisey fursan ay ku guuleysan kareen markii mar kastaba goolal ay ku hormareen ciyaar ay Fulham la yeesheen,waxaana Arsenal kulanka oo 3-3 ah ay heshey Rigoore taasi oo uu ka qasaariyey wiilka reer Spain ee Arteta.
layaabka kooxda Emirets ku dheeshay ayaa ah, inaysan difaacan karin goolasha ay soo dhaliyaan iyadoo dadka dhaliilaa ay ku tilmaameen koox aan wax dhiig ahi lahayn,marka la xusuusto kulamadii horyaalka ee Man U,kii Champions League ee Schalke iyo kulamo ka horeeyey,waxaa is weydintu tahay Gunners ma sidaan ayaa lagu eegan doonaa bisha January?.